CAAFIMAADKA Archives - Aayaha
Muxuu yahay? Waa nooc ka mid ah cabeebka waana infakshan waxaana sababa khamiirka (Candida albicans). Si kasta ha ahaatee, badanaa…
Aayaha editorMarch 22, 2020
Xaaska jilaaga caanka ah ee Idris Elba, ayaa sheegtay inuu ku dhacay fayraska covid-19, todobaad ka dib markii fayraskaan laga…
Aayaha editorMarch 16, 2020
Caabuqa Koronvirus, ee dhibaatada ku haaya caalamka ayaa ku dhacay Jilaaga caanka ah ee Idiris Elba. Idris Elba, ayaa qoraal…
Cudurka Coronavirus, waxa uu walwalbadan ku hayaa dunida oo dhan, iyadoo cudurkaan uu dad farabadan ku dilay waddanka Shiinaha halka…
Cunista Khudaarta qaar oo ay wehliso qaadashada daawada kahortagta Malaariyada ayaa caawin kara la dagaalanka Malaariyada. Qudaarta qaar waxaa laga…
Hurdo xumada ka dhalatay in qofka uu dhib kala kulmo inuu neefsado habeenkii, waxaa suuragal ah in ay la xiriirto…
Hani OsmanJanuary 7, 2020
Miyaad mar kasta Caadada kadib aragtaa madax xanuun? Madax xanuunka yimaada xilliga Caadada kadib ayaa waxaa sababa dhowr arrimood. Hoos…
Aayaha editorDecember 27, 2019
Lugo cuncunka waa mid kamid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee walaaca keena, waana inaadan iska indha tirin arrintaas. Waxaa jiraan…
Aayaha editorDecember 24, 2019
Haweenka badankood waxay la kulmaan dareen kala duwan oo isugu jira farxad iyo walwal marka uu dhowyahay waqtigooda dhalmada. Waa…
Aayaha editorDecember 18, 2019
Sida aan ognahay Burutiinada waxaa u baahan jirka bini aadamka. Sidaa darteed waxaa jiraan waxyaabo badan oo laga helo Burutiinada…